“Shanta farood waxay noqotay calaamad” – Gerard Pique oo ku kaftamay Real Madrid – Gool FM
(Barcelona) 01 Dis 2019 Daafaca kooxda Barcelona ee Gerard Pique ayaa sheegay in guushii weyneed ay ka gaareen Real Madrid kulankii ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu ay noqotay dhacdo caadi ah, isagoo dhinaca kale xusay in shanta farood ay astaan ​​u noqotay guushaas.
Gerard Pique ayaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay xiddigaha caanka ah ee cadow ku ah kooxda Real Madrid iyo taageerayaasheeda, tani waxaa lagu muujiyey inta lagu gudi jiro dabaal dega guul kasta ay Blaugrana ka gaarto kooxda ay xilfal tamaan ee Los Blancos.
Daafaca kooxda Barcelona ee Pique ayaa waxaa lagu xasuustaa isla markaana uu caan ku noqday shanta farood uu ku hor taagay wajiyada xiddigaha kooxda Real Madrid sanadihii 2010 iyo 2018.
Haddaba Gerard Pique ayaa wereysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Marka aan guuleysano kulan El Clásico ah, maalinta ku xigta taageerayaasha Barcelona waxay aadaan shaqadooda iyagoo sarre u qaadaya madaxooda, kuna faanaya inay yihiin taageerayaal kooxda Barca ah”.
“Laakiin markii aan guuldareysanno waxaan ku dhuumanaa godod, inagoo sugeyna aargudasho, inta badan, maahan wax lagu yaqiinay in lagu guuleysto Santiago Bernabéu, natiijooyin sida 3/0, 4/0 ama 5/0”.
“Shanta farood waxay noqotay astaan qof walbana wuu garanayaa waxa ay la micno tahay, waxaan sare u qaadnaa markii aan dhalino goolka shanaad, gaar ahaan marka aan ka soo hor jeedno kooxda Real Madrid”.
Yeelkeeda, Tonny Bruins Slot, waa shaqsigii ugu horeeyay ee tilmaam ka dhigta shanta farood taariikhda kulamada El Clásico, waana ninkii uu kaga dayday Gerard Pique, sannado kaddib 29/Nofambar 2010 kulankii ka dhacay garoonka Camp Nou.
Kaddib markii Iván Iglesias uu dhaliyay goolkii shanaad ee Barca daqiiqadii 86-aad kulankii ay la ciyaareen Real Madrid ee 1994, Tonny Bruins Slot oo xilligaas ahaa kaaliyaha Johan Cruyff ayaa wuxuu si waali ah ugu dabaal degay shantiisa farood goob fagaaro ah.
Laacib kooxda Liverpool ah oo shaaca ka qaaday in Van Dijk uu ku guuleysan doono abaal-marinta Ballon d'Or 2019